Akụkọ - Ihe I Kwesịrị nemara Banyere Aka Aka Gị
Ọsụsọ na-agba na ụkwụ nkịta gị.
Nkịta na-emepụta ọsụsọ n'akụkụ ụfọdụ nke ahụ ha na - enweghị ajị anụ, dị ka imi na mpe ụkwụ. Dịka ụmụ mmadụ, mgbe nkịta na-atụ ụjọ ma ọ bụ na-enwe nrụgide, ngwugwu ụkwụ ha nwere ike ịbụ mmiri.
Paw Pads pink dị mgbe ha bụ ụmụ nkịta
Mkpịsị aka nkịta na-abụkarị pink mgbe amụrụ ha, Mgbe ha tolitere, akpụkpọ ahụ dị n’azụ ha na-esikwu ike, ụkwụ ga-agbanwe na oji. Ọtụtụ mgbe, paws nkịta bụ agwakọta pink na ojii na-acha odo odo mgbe ha gbara ọnwa isii. Nke a pụtara na mpempe ụkwụ ha na-esiwanye ike, yabụ ha nwere ike iji nwayọ na-eje ije ma na-agba ọsọ ebe ọ bụla.
Kpaa Ntu ya
Ọ bụrụ na mbọ nkịta na-apị aka mgbe ọ na-eje ije ma ọ bụ na-ejide ya ngwa ngwa, ọ chọrọ ka edozie ha. Ntucha ahụ kwesịrị ịgbachapụ ala, ị nwere ike ịzụta mkpịsị aka ntu maka nkịta gị. Imirikiti vets na-enye ọrụ a ma ọ bụrụ na onye nwe ya amaghị etu esi eme ya n'onwe ya. Isi ntutu dị n’agbata paw na-eme ka ọ bụrụ mọto ma ọ bụrụ na edozighi ya oge niile. Nwere ike ihichapụ ntutu ma belata mkpụmkpụ yabụ na pad ahụ. Lelee pebbles ma ọ bụ irighiri ihe ndị ọzọ ka ị na-ebelata.
LIicktinye ma ọ bụ itatinye ukwu ha
Ọ bụrụ na nkịta gị na-ata ụra ha, ọ nwere ike na-arịa ọrịa ọgbụgba ma ọ bụ nsogbu omume dịka nchekasị. ya mere, ọ na-agbanye mpempe akwụkwọ ya iji belata ọnọdụ ya. Iji belata nkụda mmụọ, gbalịa iwere nkịta gị maka ịgagharị ọzọ, ịgba ọsọ, ma ọ bụ oge igwuri egwu na gị na nkịta ndị ọzọ iji nwee ike uche na ahụ ike. Nye ya ihe eji egwu eriri ka ọ ga - eme ka ọ ghara ilekwasị anya na aka ya.
Gbawara ma ọ bụ akọrọ pad
Ọ bụrụ na akpụkpọ anụ nkịta gị akpọọ nkụ, nsogbu a na-ahụkarị na ihu igwe oyi mgbe ikpo ọkụ na-eme ka iru mmiri dị ala n'ụlọ ya, mpempe akwụkwọ ya nwere ike ịgbawa ma mechie ọnụ. E nwere ọtụtụ nchekwa, ụdị azụmaahịa dị.